१.२२ प्रतिशत घट्यो नेप्से, कारोबार रकम १० प्रतिशतले बढ्यो | गृहपृष्ठ
Home लगानी १.२२ प्रतिशत घट्यो नेप्से, कारोबार रकम १० प्रतिशतले बढ्यो
माघ २, काठमाडौं । मङ्गलवार नेप्से परिसूचक १ दशमलव २२ प्रतिशत घटेको छ । कारोबार शुरु भएदेखि घटेको बजार अन्त्यसम्म घटेर बन्द भएको हो । यस दिन नेप्से १७ दशमलव ३ अङ्क घटेर १ हजार ४ सय १३ दशमलव ७१ विन्दुमा पुगेको छ ।
कारोबार भएका १ सय ५४ कम्पनीको ४ हजार ४ सय २१ पटकको व्यापारमा ८ लाख ११ हजार ७ सय ५९ कित्तामा रू. ३६ करोड २२ लाख बराबरको शेयर कारोबार भएको छ । कारोबार भएका १० समूहको परिसूचक घटेपछि नेप्से परिसूचक घटेको हो । जलविद्युत कम्पनीको परिसूचक ५ दशमलव शून्य ६ प्रतिशत घटेको छ । यस समूहमा पर्ने सबै कम्पनीको शेयरमूल्य घटेपछि यस समूहको परिसूचक उच्च अङ्कले घटेको हो । साथै, व्यापार समूहको परिसूचक १ दशमलव ४९, ‘अन्य’ समूहको १ दशमलव १६, लघुवित्तको १ दशमलव शून्य ३, बीमाको १ दशमलव २, बैङ्किङ र विकास बैङ्कको १, वित्त कम्पनीको शून्य दशमलव ५४, होटलको शून्य दशमलव २५ र उत्पादन तथा प्रशोधन समूहको परिसूचक शून्य दशमलव १४ प्रतिशत घटेको छ ।
यस दिन सानिमा माई हाइड्रोपावर लिमिटेडको प्रत्तिकित्ता रू.४ सय ३० मा रू.५ करोड ४५ लाख बराबरको शेयर कारोबार भएको छ । साथै, नबिल बैङ्क, नेशनल लाइफ इन्स्योरेन्स, नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स, गुँरास लाइफ इन्स्योरेन्सको संस्थापक शेयर, स्ट्याण्डर्ड चार्टर्ड, एभरेष्ट इन्स्योरेन्स, नेपाल इन्भेष्टमेण्ट बैङ्क, कामना सेवा विकास बैङ्क लिमिटेडको रू. ८८ लाखदेखि रू.२ करोड २९ लाखसम्मको शेयर कारोबार भएको छ ।
कारोबार रकम अघिल्लो कारोबार भएको दिनको तुलनामा १० दशमलव ३४ प्रतिशत बढेको छ भने कुल बजार पूँजीकरण १ दशमलव २२ प्रतिशत घटेर रू.१६ खर्ब ५१ अर्ब पुगेको छ । यस दिन ‘क’ वर्गका कम्पनीहरुको कारोबार मापन सेन्सेटिभ इण्डेक्स १ दशमलव २५ प्रतिशत घटेर २ सय ९८ दशमलव ४१ अङ्क पुगेको छ ।
कारोबार भएका १ सय ५४ कम्पनी मध्ये २१ कम्पनीको शेयर मूल्य बढेको छ भने १ सय १३ कम्पनीको शेयर मूल्य घटेको छ । साथै, २० कम्पनीको शेयर मूल्य स्थिर रहेको छ । सो दिन एनआइबिएल प्रगति फण्डको शेयर मूल्य अघिल्लो दनको तुलनामा ४ प्रतिशतले बढेको छ भने सिन्धु विकासको करीब ८ प्रतिशतले घटेको छ ।
यस दिन नेप्सेको १४ दिने रिलेटिभ स्ट्रेन्थ इण्डेक्स न्युट्रल जोन अथवा ३७ दशमलव १९ स्केलमा रहेको छ । यसले बजार सन्तुलनमा रहेको देखाउँछ । यस दिन नेप्सेको एडी रेशियो शून्य दशमलव १८ रहेको छ । यसले बजार वियरिस प्रवृत्तिमा रहेको देखाउँछ ।